Ilaaliyeyaasha iyo Bixiyeyaasha Antioksidant -ka iyo Warshadda | Shiinaha Ilaaliyaasha iyo Soo -saarayaasha Antioksidant -ka
Sharaxaad: dhagxaanta cad, budada crystalline ama jajabyada. Ur aan lahayn ama ur yar oo benzoin ah. Xasilloon hawada. Aad si fudud ugu milmi kara biyaha (53.0g/100ml, 25 ℃). Ku milmi kara ethanol (1.4g/100ml) .pH ee xalka aqueous waa 8. Ka -hortagga halsaneeda iyo sterilizability -ga ayaa ka daciifsan kuwa benzoic acid. Marka pH ay tahay 3.5, 0.05% xalka ayaa si buuxda uga hortagi kara koritaanka khamiirka. Marka pH ay tahay 6.5, fiirsashada ka sarreysa 2.5% ayaa loo baahan yahay. Isticmaala: Ilaaliyaha; wakiilka iska caabinta biocide. 1 ....
Fiitamiin c Powder Ascorbic Acid
Cation faahfaahinta: GB14754-2010, BP/EP/CP/USP/E300/FCC7 Cabbirka Xirxirida: 25KG/Kartoonka Xogta Farsamada Gacanta (TDS) ee Ascorbic Acid (Vitamin C) Badeecadda: C Magaca Kiimikada Ascorbic Acid: (5R) -5 -[(1S) -1,2-dihydroxyethyl] -3,4-dihydroxfuran-2 (5H) -Hal Foomka Kiimikada: C6H8O6 Culeyska Molecular: 176.1 Muuqashada: Caddaan ama ku dhowaad caddaan, budada crystalline ama kiristaalo aan midab lahayn, oo noqda midab midab leh hawada iyo qoyaanka. Dheecaan: Biyo si xawli ah ugu milma, xoogaa ku milma ethanol (96%). Meltin ...
Xidhmada 25kg/bac ama sida ay u baahan yihiin macaamiisha Shixnadda Badweynta/warqaadaha/hawada Haamaha Kaydinta Meel qabow. Ka dhig weelka mid xiran oo ku kaydi meel engegan oo hawo leh. Sodium dehydroacetate waa wakiilka bakteeriyada leh badbaado sare, baaxad bakteeriyadeed oo ballaaran iyo karti bakteeriyada oo xoog leh. Waxay saamayn yar ku yeelaneysaa aashitada iyo alkalinity -ka cuntada, waxayna ku sii hayn kartaa saamaynta bakteeriyada sare iyada oo la raacayo xaaladaha buugga kiimikada ee aashitada ama xoogaa alkaline ah. Daawada bakteeriyada ee a ...
Nisin waa ilaaliye cunto oo caan ka ah adduunka oo dhan. Maaddaama Nisin (oo sidoo kale loo yaqaan Streptococcus lactic peptide) uu yahay polypeptide, waxaa si deg-deg ah u dhex-mareen mindhicirka by enzymes dheefshiidka ka dib isticmaalka, Baaritaannada bayooloji-balaadhan oo ballaaran ma muujin wax iskutallaabta u adkaysta. Nisin waxay leedahay dhaqdhaqaaq liddi ku ah bakteeriyada oo ka soo horjeeda bakteeriyada Gram-positive-ka ah oo aad u tiro badan iyo xuubkooda oo sababa cuntada oo xumaata, gaar ahaanna waxay hor istaagtaa bacilli-ku-adkaysta, sida B. Stearother ...
Diacetate Sodium waa crystal cad oo leh ur uric acid, si sahlan loo nuugo qoyaanka, aad u milmi kara biyaha, kululaynaya ilaa 150 ° C kala -guurka, guban kara, deggan xaaladaha qabow iyo qalalan. Diacetate -ka soodiyamku wuxuu inta badan ku tiirsan yahay acetic acid molecular oo qudhmay si uu u yeesho saamayn bakteeriya, oo leh awood ka -hortag wanaagsan oo ka dhan ah bakteeriyada iyo caaryada. Diacetate -ka sodium wuxuu ka tirsan yahay walaxda ADI oo aan la cayimin waxaana loo qoondeeyey inay tahay maadada GRAS ee US FDA. Diacetate sodium waa molecu ...
Qiimaha Calcium Acetate maadaama cuntada lagu daro ay tahay kiristaalo u eg cirbad, jajab ama budo. Acidodor yar. Dhadhan qadhaadh U nugul qoyaanka Hoos 150 ° C ma lumiyo qoyaanka oo dhan, sida kulaylka ilaa 160 ° C, ku dhex milma acetone iyo iodine, calcium. Ku milmi kara biyaha, waxoogaa ku milmi kara ethanol. 0.2mol/L xalka aqueous of pH 7.3. Baakadaha & Dhoofinta Baakadaha: 25kg ayaa lagu buuxiyay waraaqaha-durbaannada, kartoonka, bacaha. Shixnad: EMS, DHL, Badda, iwm. Sida ku cad gorgortanka 1. Calcium ...
Baakadaha Sodium Erythorbate 25KG/ kartoon Kaydinta Sodium Erythorbate waxay ilaalisaa qalajinta heerkulka hoose oo iska ilaali iftiinka qorraxda Sodium Erythorbate waa budada cad cad, milix yar. Aad bay ugu xasilloon tahay hawada xaalad qalalan. Laakiin xalka, way ka sii xumaan doontaa marka ay jirto hawo, raad biraha, kulaylka iyo iftiinka. Barta dhalaalaysa ee ka sarreysa 200 ℃ (kala -tag). Si fudud ugu milmi kara biyaha (17g / 100m1). Ku dhawaad ​​aan lagu milmin ethanol. Qiimaha pH ee 2% aqueous solution waa 5.5 ilaa 8.0. Waxaa loo isticmaalaa cunto ahaan ...
granules crystal cad ama budada crystalline. ur aan lahayn; wuxuu leeyahay hygroscopicity, si fudud ugu milmi kara biyaha, kuma milmi karo aalkolada. Xirxirida kaalshiyamka kaalshiyamka: 25kg bacdii kraft 17MT/20'FCL bilaa sariir. (budada) 14mt net 20'FCL oo leh sariir. (granule) 16mt net halkii 20'FCL oo leh sariir. ka ilaali qoyaanka iyo kulaylka; laga fogeeyay arti sun ah ...
Naas -nuujinta sodium
Sharaxaad Sodium Lactate 867-56-1,72-17-3 waa cusbada sodium ee L (+) lactic acid oo ay soo saarto halsano. Waa xal cad, hygroscopic iyo syrupy ah. Naas -nuujinta sodiyamiyadu waxay ka diiwaangashan tahay Yurub sida cuntada lagu daro iyada oo la tixraacayo E325. Badeecadani waxay u hoggaansan tahay tilmaamaha Koodhka Kiimikada Cuntada (FCC V). Astaamaha jirka-kiimikada Magaca kiimikada 2-Hydroxypropanoic acid, cusbada monosodium Miisaanka Molecular 112.06 g/mol Foomka Molecular C3H5O3 Na Diiwaangelinta ...
Cuntada lagu daro Sodium Succinate Dibasic/Disodium Succinate
Cuntada lagu daro Sodium Succinate Dibasic/Disodium Succinate Disodium succinate, oo loo soo gaabiyo WSA, oo badanaa loo yaqaan maqaarka, waa wakiil udgoon oo si weyn loo isticmaalo xilliyada. Waxaa inta badan laga helaa cuntada badda sida kalluunka qolofka, haleyga, iyo carsaanyada, waxayna kaalin muhiim ah ka qaadataa dhadhanka macaan ee cuntooyinka noocaas ah. Intaa waxaa dheer, disodium succinate ayaa sidoo kale ku jira dhirta kale, sida boqoshaada. Heerarka nadaafadda cuntada lagu daro ee Shiinaha ayaa qeexaya in loo isticmaali karo udugga. Disodium s ...
Sodium Metabisulfite waa budada crystalline cad ama huruud ah ama crystal yar, oo leh ur xoog leh oo SO2 ah, cuf gaar ah oo ah 1.4, biyaha ku milmi kara, xalka aqueous waa aashito, taabashada aashito xoog leh ayaa sii deyn doonta SO2 waxayna soo saari doontaa cusbo u dhiganta, muddo dheer hawada , waxaa loo oksidi doonaa na2s2o6, sidaa darteed sheygu ma noolaan karo muddo dheer. Marka heerkulku ka sarreeyo 150 ℃, SO2 waa la burburin doonaa. 1. Wakiilka xalaasha (sida nacnacyada, keegga, caleemaha baasaboorka) 2.Walalka furashada (e ....